SUS စကူေခါင္းမ်ား (ေျခာက္ေထာင့္ပံု SUS နက္ အခံုး) ABPON CO., LTD.
SUS စကူေခါင္းမ်ား (ေျခာက္ေထာင့္ပံု SUS နက္ အခံုး): ABPON CO., LTD.
SUS စကူေခါင္းမ်ား (ေျခာက္ေထာင့္ပံု SUS နက္ အခံုး)
screw + bolt +2 ring F10T (Bolt + Nut + 2WasherF10T)
ဌာနမှူးဦးထုပ် SUS (hex မိုးခုံးအခွံမာသီး SUS) AISI စံတို့ကအာမခံအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော် မြင့်မားတဲ့တန်း AISI တန်းပစ္စည်းများအနေဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ နှင့် SS410 ဤသည်ပစ္စည်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ချေးဖို့ကောင်းစွာခံနိုင်ရည် သံမဏိအမျိုးအစားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. 931 Din, Din 933, Din 934, Din 912, Din 916, Din 985, Din 125, Din 127 SUS hex အနားကွပ်အခွံမာသီး (SUS) အချင်း M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 AISI စံတို့ကအာမခံအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော် SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ နှင့် SS410 ဤသည်ပစ္စည်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ချေးဖို့ကောင်းစွာခံနိုင်ရည် သံမဏိအမျိုးအစားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. 931 Din, Din 933, Din 934, Din 912, Din 916, Din 985, Din 125, Din 127 ရင်ပြင်မှာခဲရင်ပြင် SUS (Square ကိုဂဟေဆော်အခွံမာသီး SUS) အချင်း M4, M5, M6, M8 AISI စံတို့ကအာမခံအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော် SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ နှင့် SS410 ဤသည်ပစ္စည်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ချေးဖို့ကောင်းစွာခံနိုင်ရည် သံမဏိအမျိုးအစားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. 931 Din, Din 933, Din 934, Din 912, Din 916, Din 985, Din 125, Din 127 SUS သော့ခတ်ခွံမာသီး (hex Lock ကိုအခွံမာသီး SUS) အချင်း M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 AISI စံတို့ကအာမခံအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော် SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ နှင့် SS410 ဤသည်ပစ္စည်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ချေးဖို့ကောင်းစွာခံနိုင်ရည် သံမဏိအမျိုးအစားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. 931 Din, Din 933, Din 934, Din 912, Din 916, Din 985, Din 125, Din 127 SUS ဦးခေါင်း (hex အခွံမာသီး SUS) အချင်း M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M 16, M24, M27, M30, AISI စံတို့ကအာမခံအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော် SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ နှင့် SS410 ဤသည်ပစ္စည်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ချေးဖို့ကောင်းစွာခံနိုင်ရည် သံမဏိအမျိုးအစားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. 931 Din, Din 933, Din 934, Din 912, Din 916, Din 985, Din 125, Din 127
ABPON CO., LTD. သည္ one-stop service စနစ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္သည္ပစၥည္း more info ႏွင့္ လက္လုပ္ကိရိယာ စက္ရုံသံုး အပိုပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏုပ္တို႔ လုပ္ငန္းသည္ ISO 9001:2000 ႏွင့္ RWTUV စနစ္ GmbH(quality system) အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းအရည္အေသြးကို Quality Assurance Department(QA)ျဖင့္ အေကာင္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းပါသည္။
ဓာတ္ခြဲခန္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လဲ အေတြ႕ၾကံဳရင့္ အရည္ခ်င္းျပည့္မွိီေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ထုတ္ကုန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေသာအရည္ေသြးျပည့္မွိီေအာင္ စစ္ေဆးၿပီးမွသာထုတ္လုပ္ပါသည္။